Israel oo sannad gudihiis saddex doorasho qabanaysa | Xaysimo
Home War Israel oo sannad gudihiis saddex doorasho qabanaysa
Israel oo sannad gudihiis saddex doorasho qabanaysa
Ka dib markii ay suurto geli wayday in ay xisbiyada kuraasta baarlamanka ku guulaystay midkooda soo dhiso xukuumad wadaag ah, ayaa Israel waxa markii saddexaad muddo sanad ka yar gudaheed laga qaban doonaa.
Waxaana haatan la filayaa in ay doorashadu dhici doonto 2 bisha March ee kal dambe.
Ra’isal wasaare Benjamin Netenyahu iyo ninkii la loolamay, Benny Gantz, ayaa labaduba ku guul darraystay in ay aqlabiyad buuxda ka helaan doorashadii dhacday bishii Sembetmer.
Waxay sidoo kale labada hogaamiye ku heshiin waayeen in ay awoodda qaybsadaan.
Bishii Sembtember ayaa xisbiga Gantz wuxu 33 kursi ka helay 120 kursi ee baarlamanka Israel, halka Netenyahu xisbigiisa midigta ee Likud na helay 32 kursi.
Maadaama labada xisbi midkoodna aanu haysan aqlabiyad uu ku soo dhiso xukuumad wadaaga oo shardigu yahay inuu helo 61 kursi, ayaa Madaxweyne Reuven Rivlin wuxuu ka codsaday in ay dhisaan xukuumad midnimo qaran ah.
Laakiin wadahadalladii awood qaybsiga waxa la isku diiday qofka noqonaya ra’isal wasaare.
Netenyahu wuxu ku adkaystay in xisbiyada mayalka adag ee ay xulufada yihiin lagu soo daro wadahadallada. Gantz na wuxuu diiday inuu ka hoos shaqeeyo ra’isal wasaare dacwado dembi ku ooganyihiin.
Bishii hore ayaa xeer ilaaliyaha guud ee Israel ku eedeey Netenyahu inuu laaluush qaatay, musuq iyo kalsooni darro. Ra’isal wasaaruhu wuu beeniyey in uu wax dembiya galay waxaanu eedaa ku tilmaamay “isku day af-gembi” waxaanu sidoo kale ku sheegay habkaa dacwad oogista mid aan “hufnayn”.
Netenyahu weli kumuu dhawaaqin in uu baarlamanka ka codsanayo in uu siiyo xasaanad uu kaga badbaado maxkamadda iyo in kale, laakiin waxa aad loogu badinayaa inuu sidaa yeeli doono.
Salaasadii ayaa Netenyahu iyo Gantz mar kale sheegeen in ay doonayaan in ay soo dhisaan xukuumad midnimo qaran ah si looga baaqsado in doorasho kale la galo.
Laakiin hadana Arbacadii ayaa markii wakhtigii kaa dambaysta ahaa dhamaaday, ay xildhibaanno ka tirsan xisbiyada Likud iyo Blue and White waxay soo jeediyeen in baarlamanka la kala diro oo doorasho kale la qabto 2 Maarij.
Ilaa haatan ma cadda in doorasho kale oo la qabto natiijadeeda lagaga bixi karo ismari waaga oo aqlabiyad badan xisbi keli ahi heli doono.
Ra’yi ururin uu Salaasadii sameeyey Telefishanka Israel ee Channel 13 News ayaa muujisay in xisbiga Blue and White ku guulaystan doono 37 kursi halka Likud na heli doono 33 kursi.
Netenyahu waxa kale oo soo food saaray loolan xisbiga Likud gudihiisa waxaanu xisbigu sheegay in ay suurto al tahay in uu xisbigu qabto doorashadii hogaankiisa 26 bishan Diisember.
Wasiirkii hore ee arimaha gudaha Gideon Saar oo damacsan inuu tartamo ayaa qoraal uu Twitter-ka ku baahiyey ku yidhi “waxa jirta baahi qaran oo loo qabo in caqabadan laga gubo oo la so oaf-jaro xiisaddan siyaasadeed si ay u suurto gasho in la helo xukuumad adag oo dadka Israel midaysa”.